MISS MONDE 2019 : Vonona hanampy an’i Valérie ny Prezidansa, midrikina ny CMM
Mbola mihenjan-droa ny tady eo amin’ny Miss Madagascar 2019, Valérie Binguira sy ny Komity Miss Madagascar (CMM). 24 octobre 2019
Raha ny fanazavana voaray, dia efa tonga eny am-pelatanan’ilay ramatoa filohan’ny Komity Miss Madagascar ny taratasy avy tamin’ny Komity Miss Monde momba ny fangatahana fandraisan’anjaran’i Valérie amin’ny Miss Monde 2019 izay hatao any Londres ny 14 desambra ho avy izao. Miankina amin’io taratasy io anefa no hahafahan’i Valerie mahazo « visa » ho any Londres, raha ny fanazavana voaray hatrany.
Tsy mety manao sonia io taratasy avy amin’ny Komity Miss Monde io anefa ny filohan’ny CMM ka mampitarazoka ny fikarakarana ny dosie hahafahan’i Valérie hihazo an’i Londres. Ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika dia efa nilaza fa vonona hanampy ny Miss Madagascar ho amin’io fiatrehana ny Miss Monde 2019 hatao any Londres io. Nisy mihitsy moa ny fandraisan-dRamatoa Rinah Rakotomanga an’i Miss Madagascar 2019 sy tovovavy miisa roa izay efa voafidy ho Miss Madagascar tany aloha.
Manomboka mampiaka-peo amin’izao toe-java-misy izao ny ao Analanjirofo. Ny ao an-toerana izay milaza fa Analanjirofo no nipoiran’i Valerie fa an’ny Malagsy rehetra izy, ka manana adidy amin’ny fanohanana azy ny Malagasy tsy ankanavaka. Re ihany koa amin’izao fotoana izao fa hanao fanambarana ny fikambanam-behivavy 8 marsa ao Analanjirofo.